Dredge Pipe Floater / floats ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများတရုတ် - စက်ရုံစျေး - နေပလက်စ်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > တူးပိုက် Floater / Floats > တူးပိုက် Floater / floats
Dredge Pipe Floater / floats သည်ကမ်းလွန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ Dredge Pipe Floats / Floater သည် LDPE အပြင်ဘက်ရှိအမြှုပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအတွင်း၌ပင်အမြှုပ်များဖြင့်ပြည့်နေသည်။ Dredge pipe Floats / Floater သည်သောင်တူးခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Dredge pipe အတွက်စျေးနှုန်းများလျှော့ချခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
Dredge Pipe Floats / Floaters ၏အပြင်ဘက်အခွံသည်မြင့်မားသော wear ခံနိုင်သည့် LDPE ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးလှည့်ပုံသွန်းလောင်းခြင်းနည်းပညာကြောင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကို polyurethane တံခါးပိတ် - ဆဲလ်မြှုပ်နှင့်အတူအတွင်း၌ဖြည့်။ Dredge Pipe Floats / Floaters များသည် SUNPLAST HDPE သောင်ပိုက်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရော်ဘာရေပိုက်များဖြင့်ထောက်ပံ့ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။လုံလောက်ရေမျက်နှာပြင်အထက်တွင်ရေပေါ်သောင်တင်ပိုက်လိုင်းသေချာစေရန် buoyancy ။
SUNPLAST Dredge Pipe Floats / Floaters များကိုသာမန်အားဖြင့်အဝါရောင်သို့မဟုတ်အပြာရောင်အရောင်များဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီး၎င်းသည်အနီးအနားရှိအခြားသင်္ဘောများသို့သတိပေးသင်္ကေတအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အခြားအရောင်များကိုလည်းတောင်းဆိုမှုများနှုန်းအဖြစ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အပြင်ဘက်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသေချာစေရန်ထုတ်လုပ်မှုတွင် UV တည်ငြိမ်မှုကိုထည့်သွင်းထားရမည်တူးပိုက် Floats / Floaters ကောင်းတစ် ဦး ရှိသည်ခရမ်းလွန် - တည်ငြိမ်။
SUNPLAST Dredge Pipe Floats / Floaters များသည်နှစ်ခုထက်ပိုသောအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပိုက်၏ floating အတွင်းပိုင်းအချင်းသည် HDPE သောင်ပိုက်၏အပြင်ဘက်အချင်းနှင့်အတူတူ (သို့မဟုတ်အနည်းငယ်သေးငယ်သည်) ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် Dredge Pipe Floats သည် HDPE dredge pipe ပေါ်တွင်ချော်ခြင်းမရှိဘဲတင်းတင်းကျပ်ကျပ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပိုက် float နှစ်ခုထက်ဝက် galvanized သံမဏိ (သို့မဟုတ်တောင်းဆိုလျှင်သံမဏိ) ကလုပ်သောသော့ခလောက် / အခွံမာသီးများကချိတ်ဆက်နေကြသည်။
အလွန်ကောင်းမွန်သောတည်ဆောက်ပုံကြောင့် Dredge Pipe Floats / Floatersသင်္ဘောတိုက်မိခြင်းမှစွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူသို့မဟုတ်လျှော့ချနိုင်ပြီး၎င်းတို့ထောက်ပံ့နေသောသောင်တင်ပိုက်များကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ float တိုင်းတွင်နှစ်ဆအားဖြည့်သော bolts / nuts များသည် sa ကိုသေချာစေသည်Fe နှင့်ပိုက်မှလုံခြုံဆက်သွယ်မှု။
Dredge Pipe Floats / Floaters များသည်စံပြဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး moden dredge အတွက်လိုအပ်သည်။
Dredge Pipe Floats / Floaters ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
Dredge Pipe Floats / Floaters များလည်းရှိသည်သောင်အလုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်မှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အများကြီးရှိတယ်။
â€»ပိုက် float '' floating ဖွဲ့စည်းပုံမှာထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်လှိုင်းခုခံခြင်း, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းပုံ, လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်။
ကုန်းတွင်းနှင့်ရေကန်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာဖိစီးမှုအက်ကွဲခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း (ESCR) သည်ကောင်းမွန်သောကြံ့ခိုင်မှုဖြစ်သည်။
အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်း၊ ဝတ်ဆင်နိုင်မှုမြင့်မားခြင်း၊ တပ်ဆင်ရန်နှင့်သယ်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း။
“ ချေးနှင့်ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စတီးဗွိုက်ထက် ၃ ဆပိုများသည်။
- သက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်အက်စစ် - ခံနိုင်ရည်ရှိသောအယ်ကာလိုင်း၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးစသည်တို့သည်ပင်လယ်ပြင်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာဝန်ဆောင်မှုပေးနေသောသောင်ပိုက်ရေပေါ် / floaters များကိုခွင့်ပြုသည်။
ဝန်ဆောင်မှုအပူချိန်အကွာအဝေး -60 ° C-80 ° C
Dredge Pipe Floats / Floaters ၏သတ်မှတ်ချက်
SUNPLAST သည်မတူညီသောသတ်မှတ်ချက်များကိုပေးနိုင်သည်တူးပိုက် Floats / floatersသုံးစွဲသူများ၏ရွေးချယ်မှုများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော HDPE သောင်ပိုက်အများစုကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။
သောင်ပိုက်ရေပေါ် / floaters'' I.D. တူညီသောသို့မဟုတ် HDPE တူးပိုက်ထက်အနည်းငယ်သေးငယ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်O.D.,ဒါကြောင့် HDPE သောင်ပိုက်ပေါ်တွင်တင်နေစဉ်သူတို့ချော်မည်မဟုတ်။
(HDPE Dredge Pipe O.D. )
MDPE Shell ၏အထူ
Downlaod Catalog: HDPE Dredge Pipe - Dredge Pipe Floats - ရာဘာပိုက်
Technical Index Of တူးပိုက် Floats / floaters
SUNPLAST Dredge ပိုက် float / float များကိုအရည်အသွေးမြင့်မားစွာထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြင့်နှစ်ရှည်လများ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
â 15.7Mpa â
SUNPLAST တူးပိုက် Floats / floaters have been exporting to more than 20 countries, such as Bangladesh, India, Singapore, South Africa, Zambia, Netherlands, Denmark, Paraguay.,etc. Thanks to the superior quality, all customers are satisfied about our products.
SUNPLAST တူးပိုက် Floats / floaters have become the first choice for our customers.
Sunplast, through over 15 years' development, is now known as one of the leading manufacturers and suppliers of တူးပိုက် Floats / floaters in China. Our factory has introduced many advanced technologies and equipments into it. Please be free to buy the quality and low price products made in China from us.
hot Tags:: Dredge Pipe Floater / floats, တရုတ်, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ, ထုတ်လုပ်သူများ, စက်ရုံ, စက်ရုံ, စျေး, ဝယ်, တရုတ်နိုင်ငံလုပ်
ရေတိမ်မြုပ်တူးပိုက် Floatsရေပေါ်ရေတိမ်ပိုက် Floatsသောင်ပိုက် floatသောင်ရေပေါ်HDPE ပိုက် Floats
PP ချုံ့အမျိုးသမီး Tee
PP ချုံ့အထီး Tee